Samsung Galaxy Core GT-I8262 V-4.1.2 Official Firmware တင်နည်း ~ သား​ကောင်းရတနာ(နည်းပညာ)
Samsung Galaxy Core GT-I8262 V-4.1.2 Official Firmware တင်နည်း
4/30/2014 Firmware များ, Firmwareတင်နည်းများ No comments
Samsung Galaxy Core GT-I8262 V-4.1.2 Official Firmware တင်နည်းလေးဖြစ်ပါတယ် ပထမဆုံးလိုအပ်တာလေးတွေကို အောက်မှာအရင် ဒေါင်းယူလိုက်ပါ
Odin3 v3.07>>= DOWNLOAD
SamSung USB Driver= DOWNLOAD
အာလုံးဒေါင်းပြီးရင်တော့ WinRAR or Zip ဖိုင်များကို Extract လုပ်ပါ ပြီးရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း မိမိရဲ့ဖုန်းရဲ့ Settings ထဲဝင်ပြီး Unknown Sources / USB debugging ကိုအမှန်ခြစ်ပေးထားပါ Driver မရှိသေးသူများကတော့ Samsung USB Driver ကို PC မှာ Install လုပ်ပါ ပြီးရင်တော့ Odin3-v3.07 ကို Run ပြီတော့ PDA ဆိုတဲ့ button လေးကိုကလစ်ပြီးတော့ ဒေါင်းပြီးဖြည့်ထားတဲ့ Firmware MD5 file ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ အောက်ကပုံလေးအတိုင်း ပုံများသေးနေရင် ကလစ်ပြီးကြည့်ပါ
ပြီးရင်တော့ ဖုန်းကို Power ပိတ်ပါ၊ Download Mode ၀င်ဖို့ (Volume Down + Home + Power) တပြိုင်တည်းတွဲနိပ်ထားပါမယ် Warning!! တက်လာရင်တော့ Volume Up ကိုဆက်နိပ်ပါ ဒါဆို Download Mode ရောက်ပါပီ
ပြီးရင်တော့ ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပါမယ် Odin ကလဲ phone-driver ကိုသိပြီဆိုရင် ID:COM မှာအပြာနုရောင်လေးသန်းလာပါမယ် အောက်ပုံလေးအတိုင်း
အာ့ ဆိုရင်တော့အောက်နားက Star button လေးကိုနိပ်ပြီး ခဏစောင့်နေပါ သူပါသူအလုပ်လုပ်နေပါလိမ့်မယ် အပေါ်က အစိမ်းကွက်လေးထဲမှာ PASS! ဆိုပြီးပြရင်တော့ ဖုန်းကို Firmware တင်ခြင်းအောင်မြင်ပါပြီ ဖုန်း restart ကျပြီးပြင်တက်လာရင်တော့ Samsung Galaxy Core GT-I8262 V-4.1.2 Official Firmware တင်ခြင်းပြီးဆုံးပါပြီ။ လွယ်ထှာာာ :-p